Mashiinka balaastikada balaastikada balaastikada ah waxaa badanaa loo isticmaalaa soo saarista PET, PP, PE monofilament kaas oo loo isticmaali doono samaynta roomayaal nadiif ah oo balaastig ah labadaba loo adeegsado warshadaha iyo shacabka.
Mashiinka wax lagu rito ee balaastikada ah waxaa loo yaqaanaa mashiinka wax soo saarida balaastikada balaastikada ah ee noocyada kala duwan ee buraashka loo isticmaalo isticmaalka warshadaha iyo isticmaalka madaniga ah. Howlaha khadka mashiinka waa sahlan yihiin isla markaana darajo otomaatig ah ayaa sarreeya, waxaa lagu soo dhaweeyay suuqa adduunka.
Mashiinka fidinta xargaha balaastikada ah waa khadka tooska ah ee wax soo saarka PET, PP, PE monofilament kaas oo loo isticmaalo in lagu soo saaro noocyo noocyo kala duwan oo xadhig ah.
Balaastikada 'PBT synthetic monofilament' mashiinka lagu kala baxo ayaa caan ku ah soo saarista fiber-macmal ah oo loogu talagalay indhaha been abuurka ah si otomaatig ah. Sababo la xiriira soosaarka xarkaha indhaha ee tayada sare leh ee heerka sare ah, qadka mashiinka shirkadeena wuxuu ku jiraa booska ugu wanaagsan ee hormuudka ah ee arimahan.
Balaastikada PBT PET ee la isku qurxiyo oo la jeexjeexay siligga mashiinka lagu qurxiyo ayaa loogu talagalay soosaarida midab tayo sare leh oo loo isticmaali doono in lagu sameeyo burush qurxinta, buraashka qurxiyo, burushka farshaxanka, sawirista alaabada burush.
Mashiinka cadayga ilkaha ee balaastikada ah waxaa si balaadhan loogu isticmaalaa soo saarista PBT, PA nylon, PP monofilament oo loogu talagalay badeecada cadayga.
Mashiinka dharka fidsan ee balaastikada ah ee balaastikada ah ayaa soo saari kara agab kala duwan oo cayriin dabiiciga u ah samaynta noocyo kaladuwan oo rinjiga rinjiga ah. Qalabka ayaa sida caadiga ah PBT, PET iyo PA Nylon.
Xariijinta mashiinka shabaqa ee balaastikada ah ee shirkadaheena ayaa ah soosaar tayo sare leh, PET monofilament oo loogu tala galay shabaqa amniga, shabaqa cayayaanka, shabaqa busta, sheyga cadceedda.
Mashiinka wax lagu kala qaado ee PET waxaa loo adeegsadaa soo saarista siligga wareegga ee 'PET' kaas oo si ballaaran loogu adeegsan doono warshadaha beeraha, warshadaha taranta, warshadaha biyaha iwm.